Ny savorovoro maharitra ao amin’ny faritr’i Pamir ao Tajikistan · Global Voices teny Malagasy
Mitohy ny fanakatonana ny aterineto sy ny famoahana lahatsoratra na dia efa nitonitony aza ny fihetsiketsehana
Voadika ny 14 Janoary 2022 5:11 GMT
Any ivelan'ireo tanàndehibe, feno tendrombohitra ny faritra mizakatena Gorno-Badakshan. Sary natolotr'i: AmanovDmitry (Wikimedia Commons CC BY 3.0)
Mahasahana saika ny antsasaky ny faritanin'i Tajikistan, ny Faritra Mizakatena Gorno-Badakhshan (fantatra indrindra amin'ny fanafohezana azy nandritra ny vanim-potoana Sovietika hoe GBAO) faritany be tendrombohitra izay nananan'ny governemanta Dushanbe fifandraisana sarotra ara-tantara. Nitombo ny fifanenjanana tao anatin'ny fihetsiketsehana sy ny hamehana tao anatin'ny volana vitsivitsy, saingy miverina amin'ny tantara ny fototry ny fifandonana.
Pamiris avokoa ny ankamaroan'ny mponina ao GBAO ary, tamin'ny taompolo 1990, nitaky ny fahaleovantena ny mpitantana ny faritra nandritra ny ady an-trano tao Tajikistan. Ao GBAO no mandalo ny ankamaroan'ny renirano izay mamahana ny lalan-drano sy ny famokatra herinaratra ao amin'ny firenena. Manana lanjany ara-stratejika ho an'ny governemanta ny faritra na dia eo aza ny havitsian'ny mponina ao aminy izay manodidina ny 270.000 eo ho eo.
Rehefa nivoaka ho mpandresy taorian'ny ady an-trano sy ny tolona hahazo fahefana nanaraka izany, nopotipotehin'ny filoha Emomali Rakhmon izay fanoherana rehetra nandritra ny 27 taona nitondrany, nihazona amin'ny totohondry vy ny tao an-toerana [fr] ary voalaza fa nanery sy nanome baiko ny famonoana ireo mpanohitra ara-politika natao sesitany. Tao GBAO, nampihatra famoretana henjana indrindra ny governemantan'i Rakhmon noho ny fifandraisan’ny mpitondra Pamiri teo aloha tamin'ny hery mpanohitra nandritra ny ady an-trano.
Tsara ny manamarika fa, toa noho ny fahefana sy ny tombontsoa ara-tsosialy sy ara-toekarena no mahatonga ny fizarazarana na eo aza ny fahasamihafana ara-poko sy ny fivavahana. Ankoatra ny fanilikilihana ara-politika, raha ny marina, nobodoin’ny fihariana sy ny orinasam-panjakana ny faritra.
Nandritra ny folo taona teo ho eo, nihamafy ny fifandonana teo amin'ireo mponina GBAO ao an-toerana sy ireo manampahefana ao amin'ny governemanta Dushanbe.
Tamin'ny volana Jolay 2012, angamba ilay andro maizina indrindra teo amin'ny tantaran'i GBAO vao haingana, am-polony no maty tamin'ny fifandonana teo amin'ireo vondrona ao an-toerana voatondro ho mpikomy sy ny miaramilan'i Tajikistan. Notoherina ny isa ofisialin'ny olona namoy ny ainy miisa 42 taorian'ny filazan’ny hôpitaly sy ireo nanatri-maso fa farafahakeliny 200 no maty tamin'ny fitifirana. Raha nilaza ankolaka ny governemanta fa mety ny Afghana nandalo ny sisintany no nahatonga ny fikorontanana, ny fitantarana hafa kosa dia nanambara mazava tsara fa ny adi-pahefana no ivon'ny fifandirana.
Taorian'ny fifandonana, nakatona ny faritra, ny fifandraisana sy ny fitaterana an-dalambe. Saingy tsy nahavita namaha ny disadisa ny miaramilan'ny faritra, izay nipoitra tsy tapaka nandritra ny fifandonana madinika. Tamin'ny volana Jona 2014, olona telo, anisan'izany ny polisy iray, no maty voatifitra tao Khorog, renivohitry ny faritra.
Tamin'ny taona 2018, nandingana ambaratonga vaovao ny firongatry ny fifandonana, tamin'ny fifandonana mahery vaika eo amin'ny mpanao fihetsiketsehana ao an-toerana sy ny mpitandro ny filaminana.
Teo ambany fanaraha-maso henjana avy amin'ny manam-pahefana, tamin'ny fararano 2018, niharan’ny famoretana henjana ny hetsi-panoherana nataon’ny tanora ka nitarika ho amin'ny herisetra ny alin’ny 4 Novambra, rehefa nitifitra ny mponin’ny GBAO ny mpitandro filaminana ka naharatrana olona roa. Voatonona hatrany ho faritra iray hiroboroboan’ny heloka bevava ataon'ny manampahefana foibe matetika i GBAO ka ampiharana ny fepetra tany mihotakotaka, izay mametra ny fahalalahana ary hanaraha-maso hatrany ny fifandraisana sy ny fivezivezena.
Niteraka onjam-panoherana vaovao indray ny tranga tamin'ny taona 2018, izay nampiharana ny famoretana indray, na dia nanaiky ny hanendry olo-malaza eo an-toerana, Yodgor Faizov, ho lehibe vaovao ho an'ny faritra aza ny governemanta.
Nitazona ny toerany hatramin'ny volana Novambra 2021 i Faizov, rehefa nafana indray ny fifanolanana teo amin'ny mponina sy ny manampahefana. Tamin'ny faran'ny volana Novambra, niditra an-tsehatra ny governemanta niaraka tamin’ny tafika manokana raha olona an'arivony no nirohotra teny an’ araben'i Khorog ho fanoherana ny fanararaotam-pahefana ataon'ny polisy, ary niezaka nanafoana ny fihetsiketsehana. Mpanao fihetsiketsehana roa no maty ary maherin’ny arivo no voasambotra, araka ny fitantaran’ireo nanatri-maso.
Taorian’ny fisamborana, nakatona indray ny fifandraisana tao amin’ny faritra ary paositra miaramila miisa enina no natsangana hanara-maso ny fandehanana mivoaka sy miditra ao amin’io faritra io, ka noferana ho an’ireo kamiao mpitondra entana ihany izany. Naharitra iray volana mahery ny fanakatonana aterineto, izay mitohy hatramin'izao, nanakana ny fitateram-baovao tsy miankina avy ao amin'ny faritra. Rehefa niezaka nampitony ireo mpanao fihetsiketsehana ny governemanta dia nanao fampanantenana tamin’ny fifanarahana sasany, anisan'izany ny fanadihadiana tsy miankina momba ny zava-nitranga izay niteraka ny fifanenjanana. Tsy noraharahiana anefa ny fangatahan'ny mponina teo an-toerana taty aoriana.
Mifototra amin’ny tsy fisian’ny maha ara-dalàna ny mpitondra any an-toerana izay nofidin’ny fanjakana foibe ny savorovoro ao GBAO, hoy ny fanazavan’ny mpanao gazety Anora Sarkorova tamin’ny antsafa nifanaovana tamin’ny Cabar.Asia.
Ny olana raha ny marina dia tsy misy na iray aza amin’ireo lehiben’ny faritra, na ny parlemanta any an-toerana, no tena manana fahefana araka ny voalazan’ny lalàmpanorenana. Lasa lehibe mpampita ny tenin’ny governemanta foibe fotsiny ihany [na dia] ny mpitondra efa za-draharaha indrindra amin'ny toe-javatra misy ankehitriny aza, izay mandray fanapahan-kevitra ho an’ny GBAO nefa tsy mijery ny tombontsoa sy ny toe-javamisy iainan'ireo Pamiris.
Tsy maintsy mampifandanja hatrany ny tsy fahafaham-pon’ny faritra sy ny fifehezana ny toe-draharaha ny fanjakana foibe mandra-pisian'ny ahafahan’ny vahoaka any an-toerana hifidy ny mpitondra azy.
Azerbaijan 27 Desambra 2021